लक्ष्य भेट्न दृढसंकल्पित – Sajha Bisaunee
लक्ष्य भेट्न दृढसंकल्पित
‘गाउँबाट डाक्टर बन्ने सपना बोकेर राजधानी आएको छु’
गुराँस गाउँपालिका–७ लालीकाँडा दैलेखमा वि.स. २०५७ साल माघ १६ गते जन्मिएका दिपेन्द्र कुमार विसी (दिपु) घरका कान्छा छोरा हुन् । बुवा विरेन्द्रकुमार विसी र आमा टिका विसीको कोखबाट जन्मिएका दिपेन्द्र सानैदेखी जिज्ञासु स्वाभावका थिए । नयाँ ठाउँको भ्रमण गर्न र नयाँ मान्छेहरूसँग परिचय गर्न रुचाउने उनी पढाइका साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुन्छन् । सानैदेखी डाक्टर बन्ने सपना देखेका दिपेन्द्रका बुवाआमाको पनि सपना छोरो डाक्टर बनेको हेर्ने छ । अमरज्योती नमुना माध्यामीक विद्यालय सुर्खेतमा विज्ञान विषय पढ्दै गरेका दिपेन्द्र बिसीले आफ्नो कलेज लाईफका बारेमा साझा बिसौनी सहकर्मी सीता वलीसँग यसरी खुलाए :
मेरो सपना नै बुवाआमाको सपना
-मेरो सानैदेखीको सपना हो, डाक्टर बन्नु । बुवाआमाको चाहना पनि त्यही नै छ । बुवा भारतमा मजदुरी गर्नुहुन्छ । आमा घरमा खेती किसानी गर्नुहुन्छ । मैले वि.स. २०७४ सालमा शान्ति माध्यमिक विद्यालय लालीकाँडा दैलेखबाट एसइइ उत्तीर्ण गरेपछि डाक्टर बन्ने सपना पुरा गर्नको लागी वीेरेन्द्रनगर झरें । मेरो बुवाआमाले मलाई साथ दिनु भयो । घरको आर्थिक अवस्था जस्तो भएपनि मेरो सपनाको लागी मेरो आमा बुवा दिन रात पसिना बगाउंदै हुनुहुन्छ ।
हुन त हरेक बुवाआमा आºनो सन्तानको लागी जस्तो सुकै दुख गर्न तयार हुन्छन् । मेरो बुवाआमा पनि मेरो सपना पुरा गर्नको लागी दिनरात दुख गर्नुभएको छ । म पनी मेरो सपना र बुवाआमाको म प्रतीको विस्वास मर्न नदिनको लागी दिनरात प्रयास गरिरहेको छु । मलाई पढाईको अलवा समाज सेवामा पनि तिव्र ईच्छा छ । म अन्याय सहन सक्दिनँ ।
-म गाउँमा जन्मेको मान्छे । शहरमा आउँदा सबै कुरा नौलो लाग्यो । म दोधारमा भईराखेँ । मैले मेरो सपना र बुवाआमाको विस्वास जित्न सक्छु की सक्दिन भन्ने मलाई लागिरह्यो । कलेजबाट फर्कंदा पनि मैले अरु केही सोचिनँ, मेरो बुवाआमाले मलाई मजदुरी गरेरै भएपनि डाक्टर बन्ने सपना बुनेर पढ्नको लागी पठाउनु भएको छ । सपना पुरा होलाकी नहोला भन्ने लागीरह्यो । कलेजको पहिलो दिनमै मैले साथीहरू धेरै नै बनाएँ ।
मलाई कलेजको पढाई र विद्यालयको पढाईमा एकदमै फरक लाग्यो । विद्यालयमा शिक्षकहरूले प्रत्यक्ष निगरानी गरेर पढाउने तर कलेजका त्यो वातावरण नपाईने । अर्को कुरा गाउँको सानो विद्यालयमा पढेको मान्छे । भौतिक संरचना र सेवासुविधामा एकदमै कमी तर शहरमा विद्यालयको वातारण सुविधा सम्पन्न देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो । धेरै विद्यार्थी र सुविधा सम्पन्न विद्यालयको प्राङ्गणमा आफुलाई पाउँदा भाग्यमानी नै ठानेको थिएँ । म कलेजबाहेक घरमा ८ घण्टाजती पढ्ने गर्दछु ।
मलाई कलेजको राम्रो पक्ष भनेको विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन गराईरहेका शिक्षकहरूले अध्यापन गराउनु हुन्छ र नयाँ नयाँ साथीहरूसँग परिचय हुन्छ । आफुमा जिम्मेवारी थपिएको महशुष समेत हुने गर्दछ । नराम्रो पक्ष भनेको कलेजमा विद्यालयमा जस्तो कमजोर विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने भावना पाइदैन । ट्यालेण्ट विद्यार्थीमा मात्रै शिक्षकको ध्यान जाने गर्दछ मलाई त्यसमा अली दुख लाग्छ ।
पढाईमा नै केन्द्रीत
-प्रेम केटा र केटिमा मात्रै हुने चिज होईन । यो त सजिव प्राणि मात्र होइन निर्जीव सबै वस्तुमा हुने कुरा हो । हामी हरेक वस्तुलाई प्रेम गरेका हुन्छौं । हरेक काममा समेत हाम्रो प्रेम झल्कन्छ । तर मलाई केटा र केटीमा हुने प्रेमकोबारे कुनै परिभाषा पनि छैन र महसुष पनि छैन । कलेज लाईफ जो भविष्य बनाउने बेला हो यस्तो बेलामा गरेको प्रेमले भविष्य बिगार्छ मलाई यती मात्रै थाहा छ ।
मैले कलेज लाईफमा क्लास बङ्क पनि कहिल्यै गरेको छैन । फिल्म हेर्न पनि कहिल्यै गएको छैन । मलाई फिल्म हल कस्तो हुन्छ थाहा छैन । मलाई यति मात्रै थाहा छ कि मैले मेरो आमाबुवाको म माथीको विस्वास मर्न दिनु हुन्न ।
-म विद्यालय पढ्दादेखी नै विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिने गर्दथें । जिल्लास्तरिय वक्तृत्वकला प्रतियोगीतामा प्रथम समेत भएको थिएँ । पढाईमा पनि कहिल्यै पास मात्रै भईनँ, प्रथम, द्धितिय र तृतीय स्थान कहिल्यै छुटेन । कलेज लाईफमा पनि मैले अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिने गरेको छु । प्रथम, द्धितिय स्थान सामान्य लाग्छ ।
मलाई जीवनमा डाक्टर बन्ने ठुलो ईच्छा छ । यदि कुनै कारणले मेरो सपना पुरा भएन भने मलाई राजनिती गरेर देशको नेतृत्व गर्ने तिव्र ईच्छा छ । र म मा त्यो गुण पनि छ जस्तो लाग्छ ।
प्रकाशित मितिः ३० भाद्र २०७५, शनिबार १०:४७